Sida loo keydiyo xogta mobilada Google Chrome | Androidsis
Sida loo keydiyo xogta mobilada Google Chrome
Isticmaalka xogta sare waxay kaa dhigeysaa khidmadda isku xirka internetka waxay noqoneysaa mid ka mid ah kuwa ugu gaabiska ah, maadaama ay si aad ah hoos ugu dhacayso. Haddii aad isticmaasho biraawsar web si aad ula tashato macluumaadka, waxaa ugu wanaagsan inaad isku daydo inaad keydiso inta ugu badan ee suurtogalka ah rar kasta.
Kuwo badan ayaa ah dadka u adeegsada Google Chrome inay yihiin bog furaha asalka ah, mid ka mid ah codsiyada si ay awood ugu yeeshaan inay si dhakhso leh ugu dhex socdaan shabakadaha shabakadaha. Chrome waxay leedahay ikhtiyaar ay ku awood siiso dhaqaajiso qaabka aasaasiga ah kuna bixi 60% xogta mobiilka yar ee Android, kaas oo mustaqbalka fog uu yahay xoogaa gigabytes.
Haddii aad rabto inaad ku kaydiso xogta moobiilka Google Chrome, waxaa ugu wanaagsan inaad dhaqaajiso qaabka aasaasiga ah, Server-yada Google waxay fududeyn doonaan soo dejinta oo sidaas ayey kugu badbaadin doonaan heerka hawl wadeenkaaga. Bogagga shabakaddu waxay haysan doonaan muuqaalkooda waxayna u shaqeyn doonaan si la mid ah had iyo jeer.
Habka aasaasiga ah waa mid muhiim ah haddii aad ku qasban tahay inaad soo dejiso goobo kala duwan adigoon haysan xawaare dhakhso leh ama gigabytes ee heerkaaga fidsan ayaa la isticmaalay. Waxaa loo isticmaali karaa goobaha ay ku xiran tahay ADSL ama isku xirka xarkaha uusan aheyn mid aad u dhakhso badan kuna habboon aaladaha Android ee doonaya inay si deg deg ah u buuxiyaan goob.
Si aad udhaqaajiso qaabka aasaasiga ah:
Ku fur Google Chrome taleefankaaga Android ama kaniiniga
Hadda ka raadi saddexda dhibcood ee kore xagga sare oo guji Deji
Gudaha Halbeegga Qaabdhismeedka Sare wuxuu ku tusi doonaa Habka Aasaasiga ah
Ka hawlgal Habka Aasaasiga ah hadda
Haddii aad rabto inaad ku shubto bogga sidaad caadada u ahaydba, guji "Load asalka bogga" xagga kore markaad webka shubanayso
Qaabka aasaasiga ah waxaad ku arki doontaa xawaare xawaare sare leh oo aad ugu mahadcelineyso server-yada Google taasi waxay kaa dhigeysaa inaad yeelato xawaare sare waana hal shey oo ay tahay inaad maskaxda ku hayso haddii aad ku sugan tahay wadada. Qiyaasta 2-3 GB, mararka qaar way dhacdaa haddii aan si xad dhaaf ah u isticmaalno xogta moobiilka oo dhowr keyd oo megabayt ah halkii kharashaba ayaa naga dhigaysa inaan haysanno 60% xog dheeraad ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo keydiyo xogta mobilada Google Chrome
Realme waxay ku dhawaaqday Watch S Pro, Watch S Master Edition iyo Buds Air Pro Master Edition
OnePlus Nord N10 5G wuxuu helaa balastarka amniga Diseembar oo leh cusbooneysiintii ugu dambeysay